Ukulawula bonke abatyali mali ngokulula ngeCRM yomnini
Iimbonakalo » Umnini weCRM
Gcina umkhondo kungekuphela kweenkcukacha zabanini bakho ngoku kodwa kunye neenkcukacha zekamva.
Njengomphathi omkhulu wokurenta iholide okanye umqhubi weendawo ezininzi zokuhlala kunye neeparthotels, unokunxibelelana nabanini abambalwa. I-Furhtermore, ukuba usebenzisa ulwabiwo lwexesha, abatyali mali bakho banokubala kumakhulu okanye kumawaka.
Ukugcina umkhondo wamagama kunye neenkcukacha zonxibelelwano zomnini ngamnye kunye nokuqinisekisa ukuba abasebenzi bayazi ukuba zeziphi iipropathi zazo kunokuba ngumceli mngeni xa ishishini lakho lokwamkela iindwendwe likhula. Ngaphaya koko, ukulawula umbhobho wabanini abanokubakho rhoqo kuthetha ukuba kuya kufuneka usebenzise iinkqubo ezimbini ezinje Hubspot okanye ispredishithi ngokulula ukugcina umkhondo weenkcukacha zabantu bonke.
Unokunceda njani umnini we-CRM kaZeevou?
ZeevouI-CRM yomnini eyakhelweyo ikuvumela ukuba ulawule ngokulula bonke abatyali-mali osebenza nabo. Unokugcina iinkcukacha zabo zobuqu, ubanike ngokungena kwi Umnini weSango kwaye ugcine umkhondo wemeko yezemali yesivumelwano osifakile nabo bonke ukusuka kwinto enye yokungena.
Ngaphezu koko, iprofayili yomnini akufuneki inxulunyaniswe nefayile ye iyunithi. Oku kuthetha ukuba ungasebenzisa i-CRM yoMninimzi ukulawula ubudlelane bakho nezikhokelo ezinokubangela ukuba ungasebenzi nazo ngoku, ngaphandle kokufuna ukusebenzisa isicelo somntu wesithathu.